काठमाडौं । सार्वजनिक जग्गासहित व्यक्तिको जग्गा कीर्ते गरी बिक्री गर्न रु पाँच करोड २० लाख बैना लिएर ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले भक्तपुरबाट दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले चाँगुनारायण नगरपालि...
nepalipatra.com . १८ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
प्रतिनिधिसभा बैठक जारी, नीति कार्यक्रममाथिको छलफल हुँदै
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठकमा सांसदहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दैछन् । राष्ट्रपति विद...
nepalipatra.com . ३० मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
मंकीपक्स २० भन्दा बढी देशमा फैलियो, स्पेनमा बढ्यो केस, डब्लूएचओले दियो यस्तो चेतावनी
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले विश्वका २० भन्दा बढी देशबाट करिब २०० मन्कीपक्सका केशहरू रिपोर्ट गरिएको बताएको छ। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेन्सीले शुक्रबार एक प्रेस ब्रीफिंगमार्फत...
nepalipatra.com . ४२ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँ । देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ र हावा हुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने भएको छ । नेपालमा स्थानीय वायु, भारतको उत्तर प्र...
nepalipatra.com . ५१ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
घरको यस दिशामा भुलेर पनि भान्छा वा शौचालय नबनाउनुहोस्
एजेन्सी । हिन्दू धर्ममा वास्तुशास्त्रको ठूलो महत्व छ । वास्तुशास्त्रमा घरको सजावटदेखि लिएर घर, भवन, कार्यालय निर्माणसम्मका धेरै कुराहरु भनिएको छ । भान्सा कुन दिशामा हुनुपर्छ र शौचालय कुन दिशामा हुन...
nepalipatra.com . ५३ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
प्रशिक्षक कोन्टेले टोटनहम नछोड्ने
एजेन्सी । यस सिजन टोटनहमले शिर्ष चारमा स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएसँगै प्रशिक्षक एन्टोनियो कोन्टेले आगामी सिजन पनि क्लबमा नै रहने निर्णय गरेका छन् । शिर्ष चारमा क्लबले स्थान नबनाएको स्थितिमा भने उ...
nepalipatra.com . १ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
‘भूल भुलैया २’ सय करोड नजिक पुग्यो, जान्नुहोस् अहिलेसम्मको कमाई ?
एजेनसी । कार्तिक आर्यन र कियारा आडवाणी स्टारर हरर कमेडी फिल्म ‘भूल भुलैया २’ ले दर्शकको निकै माया पाइरहेको छ । फिल्मले कंगना रनौतको एक्सन फिल्म ‘धाकड’लाई पछि पारेको छ । यसैबीच कार्तिकको फिल्मले ...
इथियोपियामा ठुलाे संख्यामा पत्रकार पक्राउ
एजेन्सी । इथियोपियामा अपराधविरोधी अभियानलाई साथ दिएको आरोपमा कम्तीमा एक दर्जनभन्दा बढी पत्रकार पक्राउ परेका सञ्चारकर्मी तथा अधिकारकर्मी समूहले शुक्रबार बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका ...
बेनी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको प्रवेशद्वारदेखि नगरपालिका–२ भकुण्डेचौरको वडा कार्यालयसम्म जोड्ने मोटरबाटोको ट्र्याक खुलेको १४ वर्ष भयो । विसं २०६५ मा ट्र्याक खुलेको सात किलोमिटर दूरीको यो सडक स्...
काठमाडौँ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका २७औँ दीक्षान्त समारोह (दोस्रो चरण)मा विभिन्न सङ्कायका गरी एक हजार ७१२ जना दीक्षित हुने भएका छन् । आगामी जेठ २० गते विश्वविद्यालयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध...
टोखामा नगरकार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न, एमालेको बर्चस्व
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा नगरकार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखामा वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नगर कार्यपालिकाको ...
nepalipatra.com . ३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । संसद बैठकमा गत जेठ १० गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको छलफल आज पनि जारी छ । छलफलका लागि आज बिहान ११ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा बैठक डाकिएको हो । बैठकमा सरकारले ...
nepalipatra.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
कबड्डी - ४ ले बनायो कीर्तिमान
काठमाडौं । रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘कबड्डी ४– द फाइनल म्याच’ लाई नेपाली चलचित्रको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ओपनिङ मिलेको छ । पहिलो दिनमा पूर्ण अकुपेन्सीका साथ यस फिल्म व्यापारको नयाँ ...
nepalipatra.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा ८१८ बन्दीको कैद मिनाहा
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालका विभिन्न कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका विभिन्न ८१८ जना बन्दीको कैद मिनाहा गरेकी छन् । गणतन्त्र दिवस, २०७९ को अवसरमा नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस ...
एजेन्सी । संसारमा आँपका धेरै प्रजाति छन् । आँपलाई राजकीय फलको दर्जा पनि दिइन्छ । विश्वका विभिन्न देशका आँपको पनि आ–आफ्नै विशेषता छन् । यसैबीच यस्तो आँपको बारेमा चर्चा गरौं जसको मूल्यले तपाईलाई अचम्...
nepalipatra.com . ६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको बुसान सहरमा पानीमा तैरने सहर बन्ने भएको छ । तपाईलाई यो कुरा पत्यार नलाग्न सक्छ तर यो एकदम सत्य हो । यो सहर कुनै आश्चर्य भन्दा कम हुनेछैन । विश्वको पहिलो तैरने सहरको प्रोट...
एक्शनमा मेयर बालेन साह ! पहिलो दिनमै पुगे बञ्चरेडाँडा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको अवलोकन गरेका छन् । मतदाताहरु लाई धन्यवाद दिने कार्...
बटलरको शतकीय इनिङ्समा बैंगलोरलाई हराउँदै राजस्थान आईपीएलको फाइनलमा
एजेन्सी । आईपीएल २०२२ को दोस्रो क्वालिफायर खेलमा राजस्थान रोयल्सले एकतर्फी जित हात पारेको छ । यो जितसँगै सञ्जु सामसनको नेतृत्वमा रहेको राजस्थानको टोली १४ वर्षपछि आईपीएलको फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ...
मङ्कीपक्स रोग के हो र यसबाट कसरी बच्ने ?
काठमाडौं । विश्वका धेरै मुलुकमा देखापरेको मङ्कीपक्स रोग नेपाल पनि जोखिममा रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले नेपालमा जोखिम भए पनि अहिलेसम्म मङ्किपक्सक...
काठमाडौँ । पत्नी हत्याका दोषी सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइराला पक्राउ परेका छन् । सर्वोच्च अदालत जन्मकैदको सजाय नघटाउने फैसला गरेपछि फरार रहेका कोइराला बानेश्वरस्थित एक घरमा लुकिरहेको अवस...
धम्क्याएर रकम माग्ने ६ जना पत्रकारसहित एक विज्ञापन एजेन्सीका पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले धम्क्याएर रकम मागेको आरोपमा सञ्चारकर्मी र विज्ञापन एजेन्सीका गरी सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । योजनावद्ध तरिकाले पिडितलाई पटक–पटक फोन गरी तथा प्रत्यक्ष भेटी डर, धम्की तथा त्रास द...
nepalipatra.com . १८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई आरोप प्रत्यारोपको थलो नबनाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपालले ...
nepalipatra.com . १९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
रेनु दाहालको आजै डिस्चार्ज हुने
काठमाडौँ। दुर्घटनामा परेकी भरतपुर महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित मेयर रेनु दाहालको आजै डिस्चार्ज हुने भएको छ। रेनुकी बहिनी गंगा दाहालका अनुसार दिदी रेनुको टाउकोमा सामान्य चोट लागेकोले डिस्चार्ज हुन लाग...
प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूको सम्झना
एजेन्सी । काङ्ग्रेसले शुक्रबार भारतका शिल्पकार प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई उनको ५८ औँ वार्षिक पुण्यतिथिमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेर सम्झेको छ । नेता नेहरूका पनाति राहुल गान्धीको उपस्थितिमा ...
एजेन्सी । लागुऔषध मुद्दा खेपिरहेका बलिउड कलाकार शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानलाई उनले गलत काम नगरसेको जनाउँदै लागू औषध नियन्त्रण विभागले सफाइ दिएको छ । गत अक्टोवरमा एक पानी जहाजमा आर्यन र उनका १८ ज...
भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहाल सवारी दुर्घटनामा परिन्
काठमाडौँ। भरतपुर महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित मेयर रेनु दाहाल सवारी दुर्घटनामा परेकी छिन्। शुक्रबार दिउँसो उनी चढेको गाडी ललितपुरको स्टाफ कलेज नजिकै दुर्घटनामा परेको हो। शुक्रबार दिउँसो उनी चढेको प्...
nepalipatra.com . २० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँ। नेपालमा थप १२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा सो संख्यामा संक्रमितहरु थपिएका हुन्। सार्वजनकि उक्त तथ्यांक अनुसार ...
काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा आज शुक्रबार दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ। केही दिनदेखि निरन्तर उकालो लागेको नेप्से आज भने घटेको हो। आज नेप्से १५.८२ अंकले घटेर २ हजार २२३.७८ विन्दुमा बन्द ...
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई विषयान्तर गरियोः पूर्वसभामुख घर्ती
काठमाडौँ। पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई विषयान्तर गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै घर्तीले आपत्ति जनाएकी हुन्। संसद आमजनताको भावना अ...
राप्ती । राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्नसक्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण शेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले यही जेठ २४ गतेदेखि प्रतिकित्ता ...
सुनसरी। सुनसरीमा करेन्ट लागेर १ जनाको मृत्यु भएको छ। भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका– २ मेहेताटोलमा करेन्ट लागि १ जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार दिउँसो साढे ११ बजे छिमेकीको घर बनाउने क्रममा छतमा फलामको...
एजेन्सी । गत बुधबार बुर्किनाफासोको पूर्वी क्षेत्रमा एक हतियारधारीको आक्रमणमा परेर ५० जनाको ज्यान गएको छ । पूर्वी बुर्किनाफासोको मदजोरीमा सो हिंसात्मक हमला भएको थियो । त्यस गाउँमा अज्ञात बन्दुकधारील...
nepalipatra.com . २१ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
मन्त्री बडूले बोलेको असंसदीय शब्द हटाउन सभामुखको निर्देशन (भिडियो)
काठमाडौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले प्रतिनिधसभा बैठकमा प्रयोग गरेका असंसदीय शब्द हटाउनको लागि निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार बसेको बैठकमा...
रुपन्देही । नेपाल आयल निगमको भलवाडीस्थित डिपोमा आज लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ । बिहान ११ः४० बजेको तेल खनाउने क्रममा लु२ख २६५६ र लु२ख ५६८५ नम्बरको ट्याङ्करमा लागलागी भएको थियो । आगलागीबाट लु२ख २...
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुन सकेन
काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदको अवरोधका कारण सथागित भएको प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक २ बजे बस्ने भनिए पनि हालसम्म पुनः सुरु हुन सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दि...
बुलेटमा आगलागी भएपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड बन्द
काठमाडौँ। नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड बन्द भएको छ। ग्यास बोकेको बुलेटमा आगलागी भएपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड बन्द भएको हो। पन्ध्र किलो भन्ने ठाउँमा ग्यास बोकेको बुलेटमा आगलागी भएपछि ग्याँस लिकेज ...
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्...
काठमाडौँ। अभिनेत्री दीया पुनले शुक्रबार बिहान सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेकी छन्। निर्मल पूर्जाको एलिट एक्सपिडिसन आरोही दलमार्फत उनी सगरमाथा शिखरमा पुगेकी हुन्। निर्मल र दीयासहित २० जनाको आरोही...
nepalipatra.com . २२ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस